नयाँ समाजले समाजवादबारे बहस उठाउँदै आएको छ । मानवजातिले देखेको समाजवादको सपना अब साकार हुँदैछ । विज्ञान-प्रविधिमार्फत प्रचुर उत्पादनले त्यो सपनालाई संभव तुल्याइदिएको छ । तर यसका लागि समाजवादीहरुको विश्वव्यापी तयारी र सहकार्यबिना यो संभव हुँदैन । वर्तमान युगमा समाजवादको मोडल के हुनसक्छ ? यो विषयमा महान बहस आवश्यक छ । विश्वभरिका समाजवादीहरु एकीकृत भएर यो बहसमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ । बहसका लागि उपयोगी ठानेर हामीले समाजवादी अध्ययता तथा लेखक रमेश सुनुवारले लेख्नुभएको पुस्तक समाजवादको यात्रा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं-सम्पादक ।
सामन्तवादले मानव समाजलाई विभिन्न जातिहरुमा र श्रेणीहरुमा विभाजन गरेर त्यसको विशिष्टीकरण गर्यो; मानवीय मूल्यहरुलाई दैवीकरण गरेर तिनीहरुलाई स्थायी, शाश्वत बनायो; र सबैभन्दा बढी मानव श्रमलाई सामाजिक स्तरमा विभाजन गरेर (सामाजिक श्रम–विभाजन गरेर) त्यसको विशिष्टीकरण ग¥यो । यो नै मानव सभ्यताको लागि सामन्तवादको विशेष योगदान थियो ।
दास व्यवस्थापछि आएको सामन्तवादले मानव श्रमको परिष्कार, जातीय आधारमा श्रम–विभाजनद्वारा मानव कार्यहरु र श्रमका विषयहरुको विशेषीकरण तथा उत्पादक शक्तिको रुपमा भू–सम्पत्ति (जमिन)को विकास ग¥यो । अर्थात् त्यसले श्रमको परिष्कार तथा विशेषीकरण ग¥यो थप उत्पादक शक्तिको रुपमा भू–सम्पत्तिको विकास ग¥यो ।
अब समाजवाद आउँदै छ ।यसको उदय वर्तमान पूँजीवादको अनिवार्य परिणामको रुपमा हुँदै छ । विगतको हरेक सामाजिक व्यवस्थाको जस्तै समाजवादको पनि आफ्नो ऐतिहासिक औचित्य वा महत्व छ । मानव समाजको विकास क्रममा आगामी चरण समाजवाद हो । समाजवादले आजसम्म विभिन्न वर्गहरुमा समाजको विभाजनलाई अन्त्य गर्नेछ र त्यसको स्थानहरुमा समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुको एकता, संघबद्धता स्थापित गर्नेछ । मानवजातिले आजसम्म आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पदामाथि एउटा वर्गको एकाधिकारलाई अन्त्य गरेर त्यसलाई समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुको हातमा सुम्पिनेछ, एउटा वर्गको सम्पन्नता नै अर्को वर्गको विपन्नताको शर्त हुने अवस्थालाई, अर्को वर्गको दुर्गतिको शर्त हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ र त्यसको स्थानमा हरेकको स्वतन्त्र विकास सवैको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुने अवस्था स्थापित गर्नेछ । तब मात्र मानव समाज बाध्यताको संसारबाट स्वतन्त्रताको संसारमा जानेछ ।
“जब समाजले उत्पादनका साधनहरुमाथि अधिकार गर्दछ, तब मालहरुको उत्पादन समाप्त हुन्छ, र त्यसैसँग उत्पादकमाथि उत्पादनको प्रभुत्व पनि समाप्त हुन्छ । सामाजिक उत्पादनमा अराजकताको स्थान योजनाबद्ध, सचेतन संगठनले ग्रहण गर्दछ । त्यसपछि व्यक्तिहरुले आफ्नो–आफ्नो अस्तित्वको लाीग संघर्ष गर्नुपर्दैन । तब वास्तविक अर्थमा मानवले पहिलो पटक बाँकी पशुजगतबाट आपूmलाई अन्तिम रुपमा अलग गर्दछ, र केवल पाशविक अस्तित्वका परिस्थितिहरुलाई छोडेर वास्तवमै मानव अस्तित्वका परिपिस्थतिहरुमा, जसबाट मानिसको पर्यावरण बन्दछ, र जुन अहिलेसम्म मानिसमाथि शासन गर्दैआइरहेका थिए, तिनीहरु अब मानिसको शासन तथा नियन्त्रणभित्र आउँदछन्, र मानवजाति आफ्नो सामाजिक संगठनको स्वयं मालिक बन्नुको कारण पहिलो पटक प्रकृतिको वास्तविक तथा सचेत स्वामी बन्दछ । अहिलेसम्म उसका आफ्ना सामाजिक कार्यहरुका नियमहरुले बाह्य प्राकृतिक नियमहरुको रुपमा उसमाथि शासन गर्ने गदर्थे । अब ऊ स्वयंले तिनीहरुको पूर्ण विवेकपूर्वक उपयोग गर्दछ र तिनीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँदछ । अहिलेसम्म मानिसको आफ्नो सामाजिक संगठनले प्रकृति र इतिहासद्वारा थोपरिएको एउटा अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा मानिसको मुकाविला गर्दथ्यो, अब त्यो स्वयं मानवको स्वतन्त्र कार्यको परिणाम बन्दछ । अहिलेसम्म जुन बाह्य वस्तुगत शक्तिहरुले इतिहासमाथि शासन गर्दैआएका थिए, तिनीहरु अब स्वयं मानवको नियन्त्रणमा आउँदछन् । यही त्यो बिन्दु हो, जसको अगाडि मानिसले जब कुनै सामाजिक कारणहरुलाई गतिशील बनाउनेछ, तब तिनीहरुका मुख्य रुपमा र निरन्तर बढ्दो मात्रामा इच्छित परिणाम हुनेछन् । यो मानवको आवश्यकताको संसारबाट स्वतन्त्रताको संसारमा छलाङ्ग हुनेछ ।” (फ्रेडरिक एंगेल्स, ड्युहरिङ्ग मत–खण्डन)
१. विगतको समीक्षा
युरोपमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सवै समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । तर त्यो मान्यता भङ्ग हुन धेरै समय लागेन । सन् १७८९ मा सम्पन्न फ्रान्सेली क्रान्तिको आदर्श स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको परिणाम ठीक विपरित भयो । स्वतन्त्रता लुटतन्त्रमा बदलियो, समानता असमानतामा बदलियो र भातृत्व मत्स्य न्यायमा बदलियो ।समाजका अधिकांश मानिसहरु सर्वहारामा परिणत भए । प्रजातन्त्रअल्पतन्त्रमा फेरियो । समाजमा एकातिर अति सम्पन्नता र अर्कोतिर अति विपन्नता एकत्रित भयो ।
तब मानिसहरुले यसको विकल्प खोज्न थाले । केही विचारकहरुले यसको विकल्प समाजवाद हो भन्ने धारणा अगाडि ल्याए । तिनीहरुमध्ये प्रमुख सेन्ट साइमन, चाल्र्स पूmरिये र रोबर्ट ओवेन थिए । सेन्ट साइमनले निजी स्वामित्वको अन्त्यको प्रस्ताव अगाडि सारे । साथसाथै उनले समाजका सवै मानिसहरुले श्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चाल्र्स पूmरियेले निजी सम्पत्ति र त्यसमा आधारित पूँजीवादको तीव्र आलोचना गरे । रोबर्ट ओवेनले सहकारी आन्दोलन चलाए र सामूहिक स्वामित्वअन्तर्गत सामूहिक रुपमा काम गर्दा कति धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ र कति धेरै मानिसहरुलाई सुखी तथा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रुपमै देखाए ।
सेन्ट साइमन, चाल्र्स पूmरिये र रोबर्ट ओवेनले पूँजीवादको विकल्पमा ल्याएको समाजवाद सही थियो, तर उनीहरुले प्रस्ताव गरेको विधि गलत थियो । फलस्वरुप उनीहरु कहिल्यै पनि सफल हुन सकेनन् । उनीहरुको सपना सपनामै सीमित रह्यो ।
काल्पनिक समाजवादीहरुले शोषित–उत्पीडित वर्गहरुको बीचमा समाजवादको विचारलाई पैmल्यउने र मुक्तिको आशा जगाउने कार्यमा ठूलो योगदान गरे । तर उनीहरुको समाजवाद काल्पनिक स्वरुपको हुनुको कारण त्यो साकार हुनसकेन ।
त्यसबेला जर्मनीमा वैचारिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसका प्रतिनिधिहरु थिए जर्ज विल्हेल्म हेगेल र लुडविग फायरबाख । हेगेलले द्वन्द्ववादलाई सम्पूर्ण अंगहरुसहित पूर्णता प्रदान गरेका थिए र फायरबाखले अध्यात्मवाद (आदर्शवाद) लाई अन्तिम रुपमा अन्त्य गरेका थिए र त्यसको स्थानमा भौतिकवादलाई प्रतिष्ठापित गरेका थिए । त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्थ्यो भने संसार निरन्तर परिवर्तनशील छ र संसारको मूल आधार भौतिक तत्व हो । तर एउटा उच्चतम प्रगतिको बावजुद जर्मन शास्त्रीय दर्शनका केही कमजोरीहरुथिए ।हेगेलको द्वन्द्ववाद आदर्शवादभित्र कैद थियो । उता फायरबाखको भौतिकवाद अधिभूतवादको शिकार थियो । त्यसकारण दुवै अपांग र अपूर्ण थिए ।
इतिहासको त्यो निर्णायक चरणमा एउटा यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता थियो, जसले यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई संश्लेषण गरेर भविष्यको दृष्टि (खष्कष्यल) दिन सकोस् । यस्तो व्यक्तित्वको रुपमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्स आए । उनीहरु दुवै जर्मन थिए र आफ्नो जमानाका प्रमुख वैचारिक (बौद्धिक) उपलब्धिहरुसँग पूर्णतया परिचित थिए । विचार, मार्ग र उद्देश्य (लक्ष्य) एउटै भएको हुँदा उनीहरुको छिट्टै भेट पनि भयो र घनिष्ठ मित्रता पनि कायम भयो । त्यसपछि उनीहरुको सहकार्य आजीवन चलिरह्यो । त्यसकै परिणाम थियो माक्र्सवादको उदय ।
माक्र्स र एंगेल्सले सर्वप्रथम त्यसबेला सवैभन्दा अगाडि बढेका तीन देशहरुका प्रमुख उपलब्धिहरुलाई आलोचनात्मक परिष्कार गरे । तिनीहरु थिए– जर्मन शास्त्रीय दर्शन, अंग्रेजी शास्त्रीय राजनैतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली काल्पनिक समाजवाद । त्यसपछि तिनीहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर उनीहरुले एउटा सुस्पष्ट नयाँ दृष्टि संसारको सामु प्रस्तुत गरे– वैज्ञानिक समाजवाद ।
काल्पनिक समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवादमा बदल्नको लागि माक्र्स र एंगेल्सले चारवटा कुराहरु थपेका थिए– (१) इतिहासको भौतिकवादी धाराणा, (२) वर्ग–संघर्षको सिद्धान्त, (३) अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, र (४) क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा सर्वहारा वर्ग ।
काल्पनिक समाजवादीहरुले पूँजीवादलाई अतर्कसंगतभनेर आलोचना गरेका थिए र त्यसको स्थानमा एउटा तर्कसंगत, आदर्श समाजकोस्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जुन समाजवाद थियो। उनीहरुको लागि समाजवाद समाज विकासको अनिवार्य परिणाम थिएन, त्यसको विपरित यो कुनै महान व्यक्तिको चिन्तनको परिणाम थियो । समाजवादमा, त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण ऐतिहासिक विज्ञानमा (समाजशास्त्रमा) व्याप्त यो आदर्शवादी धारणालाई हटाएर माक्र्स र एंगेल्सले भौतिकवादी धारणा अगाडि ल्याए ।
इतिहासको भौतिकवादी धारणाअनुसार मानवजीवनको लागि आवश्यक साधनहरुको उत्पादन र विनिमय प्रणाली प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाको आधार हो । सवै सामाजिक परिवर्तनहरु र राजनीतिक क्रान्तिहरुका अन्तिमकारण मानिसको मस्तिष्कमा होइन, उसको चिन्तनमा होइन, बरु उत्पादन तथा विनिमय प्रणालीमा हुने परिवर्तनहरुमा निहित छन् । तिनीहरुको खोज प्रत्येक युगको दर्शनमा होइन, बरु अर्थव्यवस्थामा गरिनु पर्दछ । यदि कुनै सामाजिक व्यवस्था अविवेकपूर्ण, अतर्कसंगत र अन्यायपूर्ण छ भने त्यसको कारण उत्पादन तथा विनिमय प्रणालीमा भित्र–भित्रैै यस्ता परिवर्तनहरु हुनु हो, जससँग पुरानो आर्थिक प्रणालीमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाको संगति रहेको छैन । यसको साथसाथै जुन असंगति, अव्यवस्थाहरु उत्पन्न भएका हुन्छन्, तिनीहरुलाई हटाउने साधनहरु पनि धेर–थोर विकसित अवस्थामा, तिनै परिवर्तित उत्पादन प्रणालीमा निहित हुन्छन् । त्यस्ता साधनहरुलाई आदर्श, निरपेक्ष सिद्धान्तहरुको निष्कर्षको रुपमा दिमागबाट निकाल्न सकिँदैन, बरुतिनीहरुलाई विद्यमान उत्पादन प्रणालीका ठोस तथ्यहरुमै पाउन सकिन्छ ।
“आजसम्म उत्पन्न सम्पूर्ण समाजको इतिहास वग–संघर्षहरुको इतिहास रहेको छ । संक्षेपमा उत्पीडक र उत्पीडितले निरन्तर एक–अर्कोको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरु कहिले अप्रत्यक्ष र कहिले प्रत्यक्ष रुपमा निरन्तर एक–अर्कोसँग संघर्ष गर्दै आएका छन्, जुन संघर्षको अन्त्य हरेक पटक या त सम्पूर्ण समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणमा, अथवा संघर्षरत दुवै वर्गहरुको बर्बादीमा भएको छ ।” (माक्र्स–एंगेल्स, कम्युनिस्ट घोषणापत्र)
काल्पनिक समाजवादीहरुले पूँजीवादी अन्यायपूर्ण, शोषणमूलक छ, भनेर यसको आलोचना गरेका थिए र यसलाई त्याज्य घोषित गरेका थिए । तर उनीहरुले यसमा हुने अन्याय, शोषणलाई दर्शाउन सकेका थिएनन्, किनभने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा हुँदैन । त्यसलाई माक्र्सको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले उद्घाटित ग¥यो ।
माक्र्स र एंगेल्सले त्यसको विपरित समाजवादको प्रतिनिधि वर्गको रुपमा सर्वहारा वर्गलाई प्रस्तुत गरे । उनीहरुको विचारअनुसार समाजवादको लागि सर्वहारा एकमात्र क्रान्तिकारी शक्ति हो, किनभने यो वर्ग पूँजीवादको अनिवार्य परिणाम (वैध सन्तान) हो र अन्य वर्गहरु वर्ग–संघर्षको क्रममा लोप हुन्छन् । “सर्वहारावर्ग पूँजीवादको चिहान खन्ने मलामी हो ।” त्यसैगरी सर्वहारावर्ग मानव समाजको अन्तिम वर्ग पनि हो, किनभने यसले आफूलाई शासक वर्गको रुपमा स्थापित गरेर सम्पूर्ण वर्गको अन्त्य गर्दछ ।
अब यी चार कुराहरुको आधारमा समाजवाद काल्पनिकबाट वैज्ञानिक बन्यो ।
निश्चित रुपमा निरंकुश, सामन्तवादको तुलनामा पूँजीवाद अत्यन्त प्रगतिशील र क्रान्तिकारी थियो । त्यसले समाजमा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका आधारहरुको (जगहरुको) शिलान्यास गरेको थियो । जाति, कुल, वंश, धर्म, परम्परा, आदि स्थायी, अपरिवर्तनशील, र प्राकृतिक अधिकारहरुलाई समाप्त पारेर त्यसले कर्म र योग्यतालाई हरेक अधिकारको आधार बनाएको थियो । सबै शाश्वत, अपरिवर्तनशील र प्राकृतिक विभाजनहरुलाई, भिन्नताहरुलाई अन्त्य गरेर त्यसले सवै मानिसहरुलाई स्वतन्त्र र समान घोषित गरेको थियो । तर त्यसमा एउटा कुराको कमी थियो, र त्यो हो– आर्थिक समानता, जसबिना अन्य सवै स्वतन्त्रता र समानताहरु अर्थहीन हुन्छन् । पूँजीवादमा कानूनको दृष्टिमा त सवै मानिसहरु समान हुन्छन्, तर यथार्थमा (वास्तविकतामा) उनीहरु पूँजीपतिहरुको अधीनमा हुन्छन् । किनभने आर्थिक दासता सवै प्रकारका दासताको कारण बन्दछ । वैज्ञानिक समाजवादले यही आर्थिक समानतालाई अन्य सवै समानता र स्वतन्त्रताको आधार बनायो । यही कुरामा पूँजीवादको तुलनामा समाजवादको भिन्नता र उत्कृष्टता दुवै अन्तर्निहित छन् ।
यसप्रकार वैज्ञानिक समाजवादले पूँजीवादी समाजमा पैmलिएको भयानक अराजकतालाई अन्त्य गर्नको लागि ठोस विकल्पहरु (उपायहरु) प्रस्तुत ग¥यो । सर्वप्रथम त त्यसले पूँजीवादमा सुधार गर्नुको बदला पूँजीवादी व्यवस्थाकै अन्त्य गर्न आह्वान ग¥यो । किनभने त्यसको निष्कर्षअनुसार पूँजीवादमा जुन समस्याहरु उत्पन्न भएका थिए, तिनीहरुको कारण स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था थियो । त्यसपछि निर्बाधप्रतिस्पर्धाको स्थानमा योजनाबद्ध उत्पादन, पूँजीपति वर्गको सत्ताको स्थानमा उत्पादक वर्गको सत्ता, निजी स्वामित्वको स्थानमा सामाजिक स्वामित्व, र औपचारिक राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानताको स्थानमा आर्थिक स्वतन्त्रता र समानताप्रस्तुत ग¥यो । समाजवादले प्रस्तुत गरेका यी विकल्पहरु यस्ता अचूक उपायहरु थिए, जसबाट पूँजीवादको विरुद्ध (पूँजीपति वर्गको विरुद्ध) श्रमिक वर्गका सम्पूर्ण आन्दोलनहरुलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भयो ।
तब समाजवादको यात्रा शुरु भयो । यही सिद्धान्तको आधारमा विश्वमा एकपछि अर्को समाजवादी क्रान्तिहरु भए । त्यो लहरले विश्वभरि हलचल मच्चियो ।यहाँसम्म कि स्वयं पूँजीवादीहरु पनि त्यसबाट जोगिनको लागि समाजवादको खोल ओढ्न विवश भए । जसरी जीवहरुले (प्राणीहरुले)शत्रुहरुबाट बच्नको लागि आपूmलाई वातावरणको अनुकूल रंगको बनाउँदछन्, त्यसैगरी संसारका पूँजीवादीहरुले समाजवादको लहरबाट (ज्वारभाटाबाट) बच्नको लागि आपूmलाई रातो रंगले रंग्याए । विश्वभरि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नामको भ्रमको खेती गरियो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु त्यसकै एउटा उदाहरण थियो ।
तर आफ्नो महान ऐतिहासिक भूमिकाको बावजुद विगतमा समाजवादका केही सीमाहरु र कमजोरीहरु (दोषहरु) थिए । पहिलो त त्यो मानव श्रममा आधारित थियो; दोस्रो, त्यो राज्यनियन्त्रित थियो; र तेस्रो, त्यो राज्यको स्वामित्वमा आधारित थियो ।
विगतमा समाजवाद मानव श्रममा (सामाजिक श्रममा) आधारित थियो । त्यसकारण त्यो मानव श्रमका सीमाहरुद्वारा सीमित थियो । परिणामस्वरुप त्यसले पछि आउने अर्को सामाजिक व्यवस्थाको लागि, जुन विज्ञान–प्रविधिमा आधारित छ, स्थान छोड्नु प¥यो । तर त्यसबेला अन्यथा हुन पनि सक्दैनथ्यो । किनभने त्यसबेला विज्ञान–प्रविधिको विकास त्यो स्तरमा पुगेको थिएन, जसमा समाज उभिन सकोस्, र मानव श्रमबाहेक अरु कुनै उत्पादक शक्ति थिएन ।
विगतमा समाजवाद राज्यनियन्त्रित थियो । त्यसबेला राज्य र समाजलाई एउटै मानियो । त्यसकारण राज्यको नियन्त्रणलाई नै समाजको नियन्त्रण मान्ने गल्ती गरियो ।सबै कुराहरु राज्यद्वारा नियन्त्रित भएको हुँदा जनता निष्क्रिय बन्नगए । सबै कुराहरुको निर्णय राज्यले गर्ने भएपछि जनताले चाहिँ के गर्ने त ? जनताले चाहिँ दिएको खाने, अह्राएको गर्ने– अर्थात्, ‘दालभात तरकारी, जीउज्यान सरकारी !’ यसरी सबैको समानताको लागि स्थापित समाजवाद राष्ट्रिय पूँजीवादमा बदलियो । समाजको नाममा राज्यको एकाधिकार कायम भयो ।
समाज र राज्य एउटै होइनन् । राज्यसत्ता समाजबाट उत्पन्न हुन्छ र त्यसपछि समाजमाथि शासन गर्ने शक्ति बन्दछ । फेरि राज्यसत्ताको सञ्चालन त नोकरशाह९दभबगचयअचबतभ०ले गर्दछन् । त्यसकारण यदि समाजको नाममा सबै कुरा राज्यको अधीनस्थ बनाइयो भने, सबैभन्दा शक्तिशाली नोकरशाह बन्दछ । फलस्वरुप समाज कमजोर र राज्यसत्ता बलियो बन्दछ । जनता कमजोर र शासकहरु शक्तिशालीबन्दछन् । शासक र शासित, शोषक र शोषित वर्गहरुको सृजना हुन्छ । राज्यसत्ताबाट शोषक वर्गको उत्पत्ति हुन्छ । राज्यसत्ता विलीन हुनुको सट्टा अझ सशक्त, बलियो र सुदृढ बन्दछ । राज्यसत्ताको आडमा परजीवी वर्गको उदय हुन्छ, त्यसको पालन–पोषण हुन्छ ।
२. वर्तमानको विश्लेषण
आज हामी एउटा नयाँ विश्वमा छौं । यो नयाँ विश्वमा सोभियत संघ छैन, शोषित–उत्पीडित वर्गहरुको आशा–केन्द्र समाजवादी सत्ता छैन, कुनै जमानामा संसार हल्लाउने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गतिरोध आएको छ र शक्तिशाली श्रमिक संगठनहरु शिथिल भएका छन् । सम्पूर्ण विश्वमा पूँजीवादीहरुको करिब एकल वर्चस्व (प्रभुत्व) स्थापित भएको छ, जसको प्रतिरोध या त हुँदैहुँदैन या प्रभावहीन हुन्छ । तर पनि, सोभियत संघ नभएकोले यो विश्व नयाँ भएको होइन । त्यसको विपरित, यो विश्वको नयाँ स्वरुपको कारण सोभियत संघको अन्त्य भएको छ र पूँजीवादीले पनि अस्तित्व बचाउन आपूmलाई बदलेको छ ।
विगतमा नै ढल्छ भनिएको पूँजीवाद अझ हराभरा भएर आएको छ । पहिले आपसमा प्रतिस्पर्धा, युद्ध र काट–मार गर्ने पूँजीवादीहरु अहिले आश्चर्यजनक रुपलेएकजुट, संयुक्त भएका छन् । इराक, युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियाको विरुद्ध युद्धमा उनीहरुले एकताको राम्रो परिचय दिएका छन् । यस्तो एकताका दृष्टान्तहरु बहुराष्ट्रि कम्पनीहरु, निगमहरु र गठबन्धनहरुपनि हुन् ।
उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीको आरम्भमा राष्ट्रहरुको शक्ति तिनीहरुको औद्योगिक क्षमता थियो, जसको प्रमुख तत्व स्टील उत्पादन थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि, वैज्ञानिक–प्राविधिक क्षमता देशको प्रमुख शक्ति बन्यो, र अनुसन्धान तथा विकास (च् ७म्) ले शक्तिको मापनको रुपमा रहेको स्टील उत्पादनलाई प्रतिस्थापित ग¥यो । त्यसकारण वर्तमान समाजमा (उत्तर–आधुनिक समाजमा) प्रमुख समस्या विज्ञानको संगठन हो, र प्राथमिक संस्था विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्था हो, जहाँ यस्तो कार्य गरिन्छ ।
अहिले ज्ञान वास्तवमा कुनै पनि देशको सञ्चालनको लागि आवश्यक भएको छ । उत्तर–आधुनिक समाजको लागि विशेष कुरा स्वयं ज्ञानको चरित्रमा परिवर्तन हो । निर्णयहरुको संगठन र परिवर्तनको निर्देशनको लागि जुन कुरा निर्णायक भएको छ, त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानको केन्द्रीयता हो । अनुभवमाथि सिद्धान्तको प्रथमिकता र चिन्हहरुको अमूर्त प्रणालीहरुमा ज्ञानको सूत्रीकरण, जुन स्वयंसिद्धि प्रणाली मा जस्तै धेरै भिन्न तथा विविधीकृत अनुभवका क्षेत्रहरुलाई स्पष्ट गर्न, मार्गदर्शन गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ
वर्तमान समयमा विज्ञान, प्रविधि र अर्थतन्त्रको संयोजनलाई ‘अनुसन्धान र विकास’ शब्दावलीद्वारा व्यक्त गरिन्छ । यसबाट विज्ञानमा आधारित उद्योगहरु (कम्प्युटर, इलोक्ट्रोनिक्स, अप्टिक्स, पोलिमर) आएका छन्, जसले निरन्तर समाजका उत्पादन क्षेत्रहरुमा आधिपत्य जमाइरहेका छन् । तर यी विज्ञानमा आधारित उद्योगहरु मुख्यतया सैद्धान्तिक कार्यमा आधारित छन् । उदाहरणको लागि, कम्प्युटरको अस्तित्व केही वर्षपहिले फेलिक्स ब्लखद्वारा प्रवत्र्तित ठोस अवस्थाको भौतिक विज्ञानमा गरिएको कार्यबिना हुन सक्दैनथ्यो । लेजरको आगमन आणविक प्रकाशीय बिममा आई.आई.रबिसको अनुसन्धानको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
नव–प्रवत्र्तनसँग विज्ञानको संयोजन र व्यवस्थित तथा संगठित (योजनाबद्ध) प्राविधिक बृद्धिको संभाव्यता, वर्तमान समाजको प्रमुख आधार हो । पहिलेका आविष्कारहरु र नव–प्रत्र्तनहरु वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग जोडिएका थिएनन् । तर वर्तमान उद्योगहरु–पोलिमर र प्लास्टिक, इलोक्ट्रोनिक्स र अप्टिक्स, रसायनहरु र सिन्थेटिक्स, वायुयान र सञ्चार– सबै पूर्णतया विज्ञानमा आधारित छन् ।
उत्तर–आधुनिक समाजको एउटा अक्ष प्रविधि हो र अर्को अक्ष आधारभूत स्रोतको रुपमा ज्ञान हो । ज्ञान र प्रविधि सामाजिक संस्थाहरुमा मूर्त भएका छन्, त्यसकारण वर्तमान समाजलाई ज्ञान–समाज भन्न सकिन्छ ।
उत्तर–औद्योगिक समाजलाई दुई अर्थमा ज्ञान–समाज भन्न सकिन्छ ः पहिलोे, नव–प्रवत्र्तनका स्रोतहरु बढी मात्रामा अनुसन्धान र विकास (च् ७ म्) बाट प्राप्त हुन्छन्; दोस्रो, कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ठूलो भाग र रोजगारको ठूलो भाग ज्ञानको क्षेत्रमा पर्दछन् ।
विज्ञानमा आधारित प्रविधिहरु र उद्योगहरुलाई उत्पादन तथा प्रक्रियाहरुमा प्रमुख प्रगतिहरु गर्नको लागि ठूलो सुविधा प्राप्त छ ।वर्तमान समाजमा अधिकांश वस्तुहरु विज्ञानमा आधारित प्रविधिहरु तथा उद्योगहरुबाट उत्पादित भएका छन् ।
१) संरक्षणवादी पूँजीवाद (Protectionist Capitalisam)– पूँजीवादको यो चरण चौधौं शताब्दीबाट आरम्भ भएको थियो र सोह्रौं शताब्दीसम्म अस्तित्वमा रहेको थियो । यसको आधार व्यापार थियो, त्यसकारण यो व्यापारिक पूँजीवाद (Mercantile Capitalism) थियो ।
३) एकाधिकारी पूँजीवाद(Monopoly Capitalism)– यसको आरम्भ बीसौँ शताब्दीबाट भएको थियो र यो आधा शताब्दीसम्म (१९४५सम्म) रह्यो । यो वित्तमा आधारित पूँजीवाद अथवा वित्तीय पूँजीवाद Financial Capitalism) थियो ।
वर्तमान पूँजीवाद प्रतिस्पर्धी छैन; त्यसको विपरित, यो एकीकृत भएको छ, जुन भूमण्डलीकरण (नयिदबष्शिबतष्यल) को रुपमा व्यक्त भएको छ । त्यसकारण यो एकीकृत पूँजीवाद हो । अर्को शब्दमा, यसलाई अन्तर्सम्बन्धित पूँजीवाद भन्न सकिन्छ ।
१) सिण्डिकेट– समान प्रकारका उद्यमहरु मिलेर सिण्डिकेट बन्दछ, अथवा समान प्रकारका उद्यमहरुको संयोजनबाट सिण्डिकेट बन्दछ, जसको उद्देश्य मूल्य निश्चित गर्नु हो । यसले प्रतिस्पर्धाबाट हुने मूल्यको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
२) कार्टेल– भिन्न प्रकारका तर परिपूरक उद्यमहरुको संयोजनबाट कार्टेल बन्दछ । अथवा असमान तर अन्तर्निभर उद्यमहरु मिलेर कार्टेल बन्दछ, जसको उद्देश्य उत्पादन लागत घटाउनु हो ।
३) निगम(अयचउयचबतष्यल)– सम्पूर्ण उद्यमहरु मिलेर निगम बन्दछ । अथवा सवै प्रकारका उद्यमहरुको संयोजनबाट निगम बन्दछ । यसको उद्देश्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्नु हो । अथवा यसको उद्देश्य सम्पूर्ण मानवीय आवश्यकताहरु पूरा गर्नु र ग्राहकलाई आफ्नो परिधि (क्षेत्र) भन्दा बाहिर जान नदिनु हो । त्यसकारण एउटा निगमले सवै आवश्यक वस्तुहरुको र सेवाहरुको उत्पादन गर्दछ– सियोदेखि रकेटसम्म, जुत्तादेखि ताजसम्म, चुरोटदेखि औषधिसम्म । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु यसका उदाहरण हुन् ।
सन् १९३०को दशक र १९४० को दशकको बीचमा कोलिन क्लर्कले अर्थतन्त्रमा “तृतीय क्षेत्र”, सेवा क्षेत्रको बढ्दो महत्वमाथि ध्यानाकर्षित गरेका थिए । तर यो दृष्टिकोणले वर्तमान समयमा भइरहेको रुपान्तरणको केन्द्रमा पर्याप्त जोड दिएको छैन ः त्यो हो पूँजीवादी उत्पादनका सम्पूर्ण गतिशील क्षेत्रहरुमा विज्ञान–प्रविधिको बढ्दो महत्व ।
पूँजीवाद आज सदाको भन्दा धेरै शक्तिशाली छ, र हामी पूँजीवादको एउटा नयाँ युगको उद्घाटन भइरहेको देखिरहेका छौँ, जसमा निगमहरु (अयचउयचबतष्यलक) ले नयाँ वस्तुहरु तथा नयाँ योजनाहरुको विकास गर्नको लागि विज्ञान–प्रविधिको उपयोग गर्दछन्, र जसमा एकाधिकारको सृजनाको लागि प्रतिस्पर्धात्मक संघर्षले एउटा स्थायी आधार प्राप्त गर्दछ ।
यो नयाँ पूँजीवाद विज्ञान–प्रविधिका विकास तथा क्षमतामा निर्भर छ, जसमा नव–प्रवत्र्तन को स्रोत अनुसन्धान तथा विकास हुन् । विज्ञान–प्रविधिको विकासमाथि पूँजीवादको अधिकार नै यसको वर्तमान “अग्रगामी छलाङ्ग”को र स्थिर अर्थतन्त्र भएका देशहरुमाथि यसको वर्तमान विजयको एउटा अनिवार्य पक्ष हो ।
वर्तमान पूँजीवादी उत्पादनमा उत्पादित वस्तुहरु अत्यन्त जटिल स्वरुपका छन्, जसको खरिद अलग–अलग ढंगबाट गर्न सकिन्छ तर अन्य भागहरुबिना तिनीहरु उपयोगहीन हुन्छन्; उदाहरणको लागि सफ्टवेयर प्रोग्राम, नेटवर्क सब्स्क्रीप्सन, विभिन्न संयोजक घटकहरु । अल्पसंख्यक विशाल कर्पोरेशनहरुद्वारा नियन्त्रित र निरन्तर नवीकृत प्रविधिहरुको संयोजनले जोडिएका यी नयाँ वस्तुहरु सञ्जालहरु (लभतधयचपक)र प्रणालीहरुमा आबद्ध छन्, जसले आफ्नै कार्यविधिहरु र मान्यताहरु स्थापित गर्दछन् । यी नयाँ सञ्जालहरु र प्रणालीहरुविज्ञान–प्रविधिमा आधारित छन्, र त्यसैकारण यिनीहरु पूर्णरुपले त्यस्ता विज्ञान कम्पनीहरु तथा कर्पोरेशनहरुमा निर्भर छन्, जुन स्वयंले विज्ञान–प्रविधिको नियन्त्रण गर्दछन् । त्यसकारण यो नयाँ पूँजीवादको शिखरमा हुनुको अर्थ नयाँ वैज्ञानिक–प्राविधिक विकासहरुमा पारंगत हुनु हो ।
तर पनि विज्ञान–प्रविधिमा आधारित पूँजीवादको उदयसँगै आद्योगिक पूँजीवादको लोप भएको छैन । मानव समाजको विकास क्रममा सदा के देखिन्छ भने अगाडिका चरणहरु कमजोर बन्दछन् र पछाडिका चरणहरु प्रबल बन्दछन् ।त्यसैगरी वर्तमान युगमा औद्योगिक पूँजीवाद कमजोर बनिरहेको छ र विज्ञान–प्रविधिमा आधारित पूँजीवादले शक्ति प्राप्त गरिरहेको छ । यसको साथसाथै, अगाडिका सामाजिक चरणहरु, सामान्यतया अगाडिका उत्पादनका रुपहरु, नयाँ आकारमा ढालिन्छन्– जसरी कृषि तथा घरेलु जीवन औद्योगिक पूँजीवादको नव–प्रवत्र्तक शक्तिद्वारा पूर्णरुपले रुपान्तरित भएका थिए, त्यसैगरी औद्योगिक पूँजीवादका सवै सामाजिक क्रियाकलापहरु– घरेलु जीवन, कृषि, यातायात, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, सूचना–सञ्चार, आदि– विज्ञान–प्रविधिमा आधारित वर्तमान पूँजीवादको नव–प्रवत्र्तक शक्तिद्वारा गम्भिर रुपले रुपान्तरित भइरहेका छन् ।
मानव समाजका पूर्ववर्ती चरणहरुको तुलनामा उत्तरवर्ती चरणहरुमा गतिविधिहरुको विस्तार पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । म्यानुफ्याक्चर कालको पूँजीवादले आपूmलाई मुख्यतया कपडा उत्पादनमा लगाएको थियो, औद्योगिक पूँजीवादले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अत्यन्तै विविधीकृत वस्तुहरुको उत्पादनमा विस्तार ग¥यो, र विज्ञान–प्रविधिमा आधारित वर्तमान पूँजीवादले आपूmलाई मानव जीवनको हरेक क्षेत्रमा पु¥याएको छ– ज्ञान, वस्तु उत्पादन र सेवा । यस अर्थमा, विज्ञान–प्रविधिमा आधारित पूँजीवादको उदयसँगै हामी पूँजीवादको गतिविधिको क्षेत्र विस्तृत तथा सार्वभौमिक भइरहेको देखिरहेका छौं ।
त्यसकारण वर्तमान पूँजीवाद वैज्ञानिक–प्राविधिक पूँजीवाद हो ।
मानवश्रमको भूमिका (१) शक्ति, (२) कुशलता, र (३) नियन्त्रण हो । यी तीनै भूमिकाहरुलाई वर्तमान विज्ञान–प्रविधिले विस्थापन गरेको छ ः शक्तिलाई प्राकृतिक शक्तिद्वारा, कुशलतालाई यन्त्रद्वारा र नियन्त्रणलाई स्वचालनद्वारा ।
उत्पादन क्षेत्रलाई तीन श्रेणीहरुमा विभाजन गरिएको छ– (१) प्राथमिक क्षेत्र (उचष्mबचथ कभअतयच), (२) द्वितीय क्षेत्र (कभअयलमबचथ कभअतयच) र (३) तृतीय क्षेत्र (तभचतष्बचथ कभअतयच) । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग र तृतीय क्षेत्रमा सेवा पर्दछन् । यी क्षेत्रहरुमा श्रमको संलग्नता क्रमशः स्थानान्तरण भएर वर्तमान युगमा सेवा क्षेत्रमा पुगेको छ । तर सेवा क्षेत्र उत्पादनको सहायक क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसकारण वर्तमान समाजमा मानव श्रमको भूमिका पनि सहायक बनेको छ।
उत्पदक शक्तिको रुपमा विज्ञान–प्रविधिको विकास र त्यसमाथि पूँजीपति वर्गको एकाधिकारको परिणामस्वरुप समाजका बहुसंख्यक मानिसहरु उत्पादन क्षेत्र र सम्पदा (सम्पत्ति) को स्वामित्व दुवैबाट विस्थापित भएका छन् । यिनीहरुबाट अब एउटा नयाँ वर्गको निर्माण भइरहेको छ । यही वर्ग वर्तमान युगको सवैभन्दा क्रान्तिकारी वर्ग हो, किनभने यससँग गुमाउनको लागि आफ्नो केही पनि छैन, तर जित्नको लागि सम्पूर्ण संसार छ, र यो वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको अनिवार्य परिणाम, वैध सन्तान, हो ।
३. भविष्यको योजना
१) प्रतिपर्धी पूँजीवाद– प्रतिस्पर्धी पूँजीवादको अवस्थामा पूँजीपति वर्गहरुको बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण सम्पूर्ण विश्वभरि पूँजीवाद कमजोर भएको थियो । त्यसकारण सम्पूर्ण विश्वभरि एकैपटक समाजवादी क्रान्ति संभव थियो । त्यही अवधिमा माक्र्सवादको उदय भएको थियो, जसले क्रान्तिको लक्ष्यको रुपमा समाजवाद र क्रान्तिको विधिको रुपमा सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा सम्पूर्ण विश्वभरि (कम्तीमा पनि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी तीन ठूला पूँजीवादी देशहरुमा) एकैपटक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरालाई निर्धारित गरेको थियो । पेरिस कम्युनको असफलता त्यसको पुष्टि थियो । त्यो अवस्था आरम्भदेखि सन् १९०० सम्म रह्यो ।
२) एकाधिकारी पूँजीवाद– सन् १९०० सम्ममा प्रतिस्पर्धी पूँजीवाद एकाधिकारी पूँजीवादमा, साम्राज्यवादमा रुपान्तरित भइसकेको थियो । फलस्वरुप सम्पूर्ण विश्वमा एकैपटक समाजवादी क्रान्ति हुने अवस्था समाप्त भएको थियो । भी.आई. लेनिनले यो तथ्यलाई महसुस गरेर एउटा देशमा वा केही देशमा मात्र समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने मान्यतालाई अगाडि सारे । तर दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियले प्रथम कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियकै मान्यतालाई अगाडि बढाएको थियो । त्यसकारण लेनिन र दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिका नेताहरुको बीचमा मतभेद उत्पन्न भयो । लेनिन रुसमा समाजवादी क्रान्ति गर्न चाहन्थे, तर दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिका नेताहरुलाई त्यो कुरा मान्य थिएन । अन्ततः लेनिनले दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिलाई नै परित्याग गरे ।
३) अर्ध–सामन्ती र अर्ध–उपनिवेशी अवस्था– साम्राज्यवादको आगमनपछि विश्वमा दुई अवस्थाहरु सृजना भए– (१) एक वा केही देशहरुमा मात्र समाजवादी क्रान्ति हुनसक्ने र (२) पूँजीवादी क्रान्ति नभएका देशहरुमा समाजवादी र पूँजीवादी क्रान्ति दुवै हुन नसक्ने । (अथवा (१) सम्पूर्ण विश्वमा एकैपटक समाजवादी क्रान्ति नहुने, र (२) पूँजीवादी क्रान्ति नभएका देशहरुमा पूँजीवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्ति दुवै नहुने ।)
तर पनि, यो दोस्रो अवस्थालाई बेवास्ता गरेर (ध्यान नदिई) तेस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई कोमिन्ताङ पार्टीको अधीनमा रहेर पूँजीवादी क्रान्तिको लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर माओ त्से–तुङले त्यसलाई अस्वीकार गरे । त्यसको प्रतिउत्तरमा उनले भनेका थिए– “हामी जुत्ताको नापअनुसार खुट्टा काट्दैनौँ, खुट्टाको नापअनुसार जुत्ता काट्छौँ । चीनको विशेषतासँग नमिल्ने कुरा, चाहे त्यो माक्र्सले नै भनेको किन नहोस्, त्यसलाई हामी दृढतापूवर्क अस्वीकार गर्दछौँ ।”चीनको त्यो विशेषता के थियो त ? माओका अनुसार चीनको त्यो विशेषता अर्ध–सामन्ती र अर्ध–उपनिवेशी अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थाको देशमा साम्राज्यवादको हस्तक्षेप भएको हुँदा पूँजीवादी क्रान्ति हुनसक्दैन र पूँजीवादी क्रान्ति नभइसकेको हुँदा समाजवादी क्रान्ति पनि हुनसक्दैन । तब त्यस्ता देशहरुमा कस्तो क्रान्ति हुनसक्दछ त ? त्यसको लागि माओले क्रान्तिको लक्ष्यको रुपमा नयाँ जनवाद र क्रान्तिको विधिको रुपमा संयुक्त मोर्चाको माध्यमबाट दीर्घकालीन जनयुद्ध प्रस्तुत गरे । त्यसकै आधारमा चीनमा सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । चिनियाँ जनवादी क्रान्ति माओवादको पुष्टि थियो ।
विगतमा समाजवादी क्रान्तिको लागि श्रमिक वर्गलाई निर्णयक प्रमुख शक्ति मानिएको थियो र श्रमिक संगठनलाई क्रान्तिको प्रमुख साधन । तर जब उत्पादन क्षेत्रमा विज्ञान–प्रविधिको आगमन भयो र यसले उत्पादन क्षेत्रबाट श्रम–शक्तिलाई विस्थापित ग¥यो, तब श्रमिक वर्गको संख्या घट्न थाल्यो । अहिले श्रमिक वर्ग अत्यन्तै सानो, अल्पसंख्यक छ । त्यसकारण अब यसले समाजवादी क्रान्तिको लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । र, श्रमिक संगठन निर्णायक साधन हुनसक्दैन । समाजवादी क्रान्तिको लागि निर्माण हुने संगठनमा ती सम्पूर्ण पक्षहरु सम्लग्न हुनुपर्दछ, जुन वर्तमान भूमण्डलीकृत पूँजीवादबाट उत्पीडित छन् र जसको मुक्ति समाजवादमा मात्र सम्भव छ । अब श्रमिक संगठनले ती सम्पूर्ण पक्षहरुलाई समेट्न सक्दैन, जुन वर्तमान युगका निर्णायक क्रान्तिकारी शक्ति हुन् । विशेषगरी यसले त्यो पक्षलाई समेट्न सक्दैन, जुन वर्तमान पूँजीवादको अनिवार्य परिणाम हो– अर्थात् उत्पादन क्षेत्रबाट विस्थापित, सीमान्तकृत वर्ग । यही वर्ग वर्तमान युगको वास्तविक क्रान्तिकारी वर्ग (शक्ति) हो । यो वर्ग वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको तख्ता नपल्टाई अस्तित्वमा रहन सक्दैन । त्यसकारण नयाँ क्रान्तिकारी संगठन यही वर्गलाई लिएर बन्दछ ।
अहिले पूँजीवादीहरुसँग दुई स्तरका सेनाहरु छन्– (१) राष्ट्रिय स्तरको सेना , र (२) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेना । राष्ट्रिय स्तरको सेनाको रुपमा उनीहरुको सेना आफ्नो देशको सेना हो । किनभने वर्गीय दृष्टिकोणबाट उनीहरु सत्तारुढ (सत्ताधारी) वर्ग हुन् र पूँजीवादी व्यवस्थाका सम्पूर्ण तत्वहरुले उनीहरुको सेवा गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेनाको रुपमा उनीहरुको सेना नेटो (ल्ब्त्इ) सेना र संयुक्त राष्ट्रसंघको सेना हुन् । (अथवा प्रत्यक्ष रुपमा नेटो सेना र अप्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सेना हुन् ।) क्रान्तिकारी वर्गले पूँजीवादी वर्गका यी दुवै सेनाहरुको सामना गर्नु आवश्यक छ । त्यसकारण क्रान्तिकारी वर्गसँग पनि अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दुई प्रकारका सेनाहरु हुनुपर्दछ । र, यी सेनाहरु अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित हुनुपर्दछ, परमाणु बम तथा अन्तर–महादेशीय मिसाइलद्वारा सुसज्जित हुनुपर्दछ । क्रान्तिकारी वर्गले अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरबाट युद्ध लड्नु, संघर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
पूँजीवादीहरुले औपचारिक र आधिकारिक सेनाबाहेक अन्य सेनाको अस्तित्व मान्य हुँदैन भनेर यो क्रान्तिकारी सेनाको विरोध गर्न सक्दछन् । तर उनीहरुले आफ्नो विरोधको खण्डन आपंैm गरिरहेका छन् । त्यो हो– नेटो सेनाको अस्तित्व, जुन कुनै आधिकारिक र औपचारिक सेना होइन । यदि उनीहरुले आफ्नो रक्षाको लागि निजी सेना राख्न पाउँछन् भने, अरुले किन नपाउने ?
४) राजनीतिक सत्ता
यो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण विज्ञान–प्रविधिको उच्चतम विकास हुनगएको छ । पूँजीवादले पहिलो संकटलाई साम्राज्यवादको सहायताबाट पार गरेको थियो र यसले दोस्रो संकटलाई विज्ञान–प्रविधिको सहायताबाट पार गरेको छ । विज्ञान–प्रविधिको उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आर्थिक संगठनहरुको माध्यमबाट भूमण्डलीकृत पूँजीवादले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यसबाट पूँजीपतिहरुको आपसी संघर्ष तथा पूँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गको बीचको संघर्ष दुवै शिथिल हुनगएका छन् । फलस्वरुप पूँजीवाद एक हदसम्म संकटमुक्त भएको छ ।
यसबाट अनिवार्य रुपमा एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ– सर्वहारा वर्गको लागि आफ्नो स्वायत्त अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ ।
एकीकरणका तीन चरणहरुर स्वरुपहरु छन् । प्रथम चरणमा समान प्रकारका उद्यमहरुको संघबद्धता हुन्छ; दोस्रो चरणमा भिन्न प्रकारका तर परिपूरक उद्यमहरुको संघबद्धता हुन्छ; र तेस्रो चरणमा सम्पूर्ण उद्यमहरुको संघबद्धता हुन्छ । जुन प्रक्रिया र चरणबाट एकीकृत पूँजीवादीमा एकीकरण भएको छ, त्यही प्रक्रिया र चरणबाटसमाजवादमा एकीकरण हुनसक्दछ– (१) सिण्डिकेट, (२) कार्टेल र (३) कर्पोरेशन । तर सिण्डिकेट, कार्टेल र कर्पोरेशन पूँजीवादका संयन्त्रहरु हुन्, त्यसकारण यिनीहरु समाजवादमा प्रकट हुँदैनन् । समाजवादमा यिनीहरु एकीकरणका चरण र प्रक्रियाको रुपमा परिणत हुन्छन् ।
विश्वमा अहिलेसम्म क्रान्तिका तीन विधिहरुको विकास भएको छ– १) जनआन्दोलन, २) सशस्त्र संघर्ष र ३) निर्वाचन । तर यी विधिहरु निरपेक्ष होइनन, बरु सापेक्ष हुन् । यिनीहरुमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय र परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । सामान्य रुपमा यति मात्र भन्न सकिन्छ– जनताको अल्पसंख्यक भाग मात्र सचेत भएको अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष, बहुसंख्यक भाग सचेत तर सत्ताको अप्रत्यक्ष विरोधी भएको अवस्थामा जनआन्दोलन र जनताको बहुसंख्यक भाग सचेत र सत्ताको प्रत्यक्ष विरोधी भएको अवस्थामा निर्वाचन उपयुक्त हुनसक्दछ । क्रान्तिका यी तीन विधिहरुको प्रयोग परिस्थितिअनुसार अलग–अलग, र एकल वा संयुक्त रुपमा हुनसक्दछ । उदाहरणको लागि, नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट भएको थियो भने २०४६ सालको क्रान्ति जनआन्दोलनको माध्यमबाट भएको थियो र २०६२–६३ को क्रान्ति सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनको संयोजनबाट भएको थियो । क्युबाको क्रान्ति सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट भएको थियो, चिली र भेनेज्वेलामा निर्वाचनबाट क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए । चीनको क्रान्ति सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट र भार
तको क्रान्ति जनआन्दोलनको माध्यमबाट सम्पन्न भयो । त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा निर्वाचनको माध्यमबाट र इण्डोनेसियामा जनआन्दोलनको माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न भयो । तर एउटा सामाजिक शक्तिबिना यिनीहरुमध्ये कुनै पनि विधिद्वारा सफलता प्राप्त हुन सक्दैन । त्यो सामाजिक शक्ति सामाजिक व्यवस्थाबाट निर्माण हुन्छ । त्यसकारण क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सर्वप्रथम पुरानो सामाजिक व्यवस्थाको विरुद्ध नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यही नयाँ सामाजिक व्यवस्थामा उभिएर आवश्यकताअनुसार क्रान्तिका तीन विधिहरुमध्ये कुनै पनि विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
समाजवादको लक्ष्य उत्पादनका साधनहरुमाथि समाजको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । अथवा यसको लक्ष्य उत्पादनका साधनहरुमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वलाई अन्त्य गरी सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । तर यो लक्ष्य उत्पादनका साधनहरुको राष्ट्रियकरण गरेर पूरा हुनसक्दैन, जुन विगतको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी यो लक्ष्य उत्पादनका साधनहरुमाथि सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व घोषणा गरेर पनि पूरा हुनसक्दैन, किनभने त्यो अमूर्त हुन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम समाजका समूहहरुको स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्दछ । यसको विधि राष्ट्रियकरण गरेर उत्पादनका साधनहरुलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु होइन, समाजका समुदायहरुको स्वामित्वमा ल्याउनु हो । समाजका विभिन्न समूहहरु, संघटकहरुउत्पादन प्रक्रियाका अंगहरु हुन् । तिनीहरुको स्वामित्वमा सम्पूर्ण उत्पादन साधनहरु र सम्पदा ल्याउनु आवश्यक छ ।
समाजका संघटकहरुको रुपमा विभिन्न समूहहरु हुन्छन् । ती समूहहरुले समाजका अलग–अलग कार्यहरु सम्पन्न गर्दछन् । अलग–अलग भूमिकाहरु निर्वाह गर्दछन् । समाजीकरणको प्रक्रिया ती समूहहरुलाई तिनीहरुको आफ्नो क्षेत्रको स्वामित्व प्रदान गरेर सम्पन्न गर्नसकिन्छ । उदाहरणको लागि, किसानहरुको समूहहरुलाई कृषिको स्वामित्व, मजदूरहरुको समूहहरुलाई उद्योगको स्वामित्व प्रदान गरेर कृषि तथा उद्योगको समाजीकरण गर्नसकिन्छ । कारण कृषिको वास्तविक स्वामी किसानहरु र उद्योगका वास्तविक स्वामी मजदूरहरु हुन्छन् । समाजको प्रत्येक क्षेत्र त्यसमा संलग्न मानिसहरुको समूहलाई सुम्पिनु वास्तविक स्वामित्व स्थापनाको वास्तविक प्रक्रिया वा विधि हो ।तर समाजवादको लागि वास्तविक स्वामित्व स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो त्यसको एउटा पक्ष मात्र हो । त्यसको अर्को पक्ष समाजीकरण हो । समाजीकरणको लागि हरेक उद्यमलाई समाजको एउटा अंग बनाउनु पर्दछ । यसरी हरेक उद्यम सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंगमा परिणत भएपछि त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन्छ र त्यसले समाजमाथि शासन गर्न पाउँदैन । कारण त्यसलाई अन्य अंगहरुले (उद्यमहरुले) नियन्त्रण गर्दछन् ।
समाजवादको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । कल्पनावादीहरुको कल्पनामा मात्र अस्तित्ववान समाजवाद माक्र्सवादको रुपमा सिद्धान्तमा प्रकट भयो । माक्र्सवादको रुपमा सिद्धान्तमा मात्र अस्तित्ववान समाजवाद पेरिस कम्युनको रुपमा सन् १८७१ मा व्यवहारमा साकार भयो । पेरिस कम्युनमा ७२ दिनसम्म मात्र अस्तित्व रहेको समाजवाद १९१७ मा बोल्शेभिक क्रान्तिको रुपमा पृथ्वीको ६ खण्डको १ खण्ड सोभियत संघमा स्थापित भयो । र, सोभियत संघमा ७०बर्षसम्म मात्र अस्तित्वमा रहेको समाजवाद अब सम्पूर्ण विश्वमा ७० शताब्दीसम्म अस्तित्वमा रहने गरी स्थापित हुने अवस्था तयार भइरहेको छ ।